Labo Xildhibaan oo sheegey iney ka baxeen Barlamaanka Somalia, xubno kalena ay qorsheynayaan iney istiqaaladooda keenaan – idalenews.com
Xildhibaan C/wali Maxamed Cali Gaas iyo Xildhibaan Xuseen Khaliif Xaasi oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in uu gabi ahaanba ka tanaa suleen ka mid ahaanshaha baarlamaanka Soomaaliya.
C/wali Cali Gaas oo ahaa Ra’iisul Wasaarihii ugu dambeeyey ee dowladii ku meel gaarka ayaa warqad uu u soo qorey gudoomiyaha barlamaanka ku sheegey inuu isaga baxey, beeshii uu ka dhaseyna sidoo kale u sheegey in bedelkiisa keenaan.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ku dhawaaqay in xildhibaan C/wali Gaas uu ka baxay baarlamaanka isla markaana bookiisii lagu soo badalay xildhibaan kale.
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in xildhibaan Xuseen Qaliif Xaashi oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya uu iska dhiibay xilkiisa wuxuuna tilmaamay gudoomiyaha baarlamaanka in xildhibaan kale lagu soo badalay xildhibaankaasi.
Ra’iisul wasaarihii Hore ee Soomaaliya C/wali Maxamed Gaas ayaa wuxuu ka mid ahaa musharixiintii u tartamay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya doorashadii sanadkaan ka dhacday magaalada Muqdisho.
Gaas ayaanan kulamdii baarlamaanka Soomaaliya aanan ka soo qaybgalin mudooyinkii ugu danbeeyay asagoo ku maqnaa wadanka dibadiisa oo aanan joogin magaalada Muqdisho.
Masuulkaan ayaa haatan wuxuu ku suganyahay magaalada Nairobi waxaana laga yaabaa in uu isku diyaarinayo doorashada madaxtinimo ee maamulka Puntland, inkastoo madaxweyne Faroole uu doonayo in uu mudo hal sano ah uu ku darsado xiliga uu sii joogayo xafiiska.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Xildhibaano kale ay jiraan, kuwaasoo doonaya inay iscasilaan , waxaana u badan xubnihii Wasiirada ka socday Xukuumadii C/wali gaas, kuwaasoo badankood dalka dibadiisa ku maqan.
Dhowaan ayey aheyd markii Prof Axmed Ismaaciil Samatar oo hadda ku sugan magaalada Minneapolis, ee gobalka Minnesota sheegey inuu isaga soo tagey xarunta fadhiga barlamaanka Soomaaliya, rajo xumana ka muujiyey isaga oo aan wax fasax ah soo qaadan. Sidoo kale Gudoomiye Tarsan ayaa isna booskii lagu bedelay Dr. Dufle ka dib markii uu soo xaadiri waayey kulmada barlamaanka muddo ka badan sedex bil isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaasna ka meermeeraystey in loo dhaariyo xilkaas.